Fampidiran-drivotra fanesorana miaraka amin'ny fiaramanidina miaraka amin'ny toeram-piasana mihazakazaka matetika
Tanjona hametrahana mpandrindra eo afovoany sy hiaro ny vy amin'ny fiangonan'ny tariby hatramin'ny 500 (250) ° F (° C).
Fitaovana • Fivorian'ny fiangonana
• Tady ravin-damosina
Fitaovana fanamafisam-peo fampidirana DW-UHF-4.5kW, miaraka amina tobin-tsolika lavitra misy capacitors roa 0.33 μF. Coil fanafanana fampidirana noforonina ary novolavolaina manokana ho an'ity fampiharana ity.
Fomba entina mampiasa coil hélique multi-turn ary apetaka amin'ny faritra iombonan'ny loko ny mari-panondro mari-pana. Ny fivorian'ny tariby dia apetraka eo ambonin'ny coil fanafanana fampidirana ary ampiharina ny herin'ny RF. Ny vanim-potoana-amin'ny-mari-pana sy ny lamina fanafanana amin'ny ampahany dia napetraka. Ny fivorian'ny tariby manaraka dia apetraka amin'ny coil, mafana ny fivoriambe ary ampidirina ao anaty tonon-taolana ny tariby solder. Mafana tsara ny fivoriambe ary mahatratra 500 ° F ao anatin'ny 10 segondra.
Vokatra / tombony • fanesorana ny dingana fametahana
• Misy fifandraisana azo antoka azo atao
• Fotoana haingana kokoa
Sokajy Technologies Tags Fiatoana mahazaka tampoka, RF fanolanana, drazana, drazana, drakitra amin'ny fifandraisana, fanadinana, drazana mahamay